5 Chọrọ maka ihe nchọgharị ... ma ọ bụ Opera | Martech Zone
Modifoo agwala m ka m kwuo maka ihe m chere na ihe nchọgharị Opera chọrọ iji nweta oke ahịa. Opera bụ ihe nchọgharị dị egwu site na Norway nke na-arụ ọrụ ma na-atụgharị anya. Enwere m ọkacha mmasị na ụdị Mobile nke na-arụ na ekwentị m. Opera nwere ike ọ gaghị amasị nzaghachi m na nke a - ma ọ bụ ihe nchọgharị ọ bụla ọzọ - mana ebe a na-aga.
5 Achọrọ maka Opera
Wụpụta ihe mejupụtara data grid nke enwere ike mepee iji HTML isi wee ikekwe CSS dị elu. Okwesiri inwe ntaneti, nhazi, idezi ya, wdg.
Wụpụta ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi nke na-akwado QuickTime, Windows Media, na Real Audio. Ọzọ, kwe ka m zụlite na ya naanị iji HTML na CSS. Tinye ike gụgharia.
Mee ihe editọ nke ga - ewepụta HTML na CSS dị ka ezigbo nchịkọta akụkọ ntanetị. Kwe ka ndị ọrụ zụlite ya, biputere ma weghachite ya site na XML-RPC yana FTP.
Wụpụta ihe na-emepụta eserese nke na-adọta chaatị dị na Excel. Kwe ka ekekọta ya na datagrid na enweghị nsogbu.
Enweghị ebe dị na peeji ụlọ gị ka akara ngosi nnabata maka ndị mmepe! Ndị mmepe ga-eme ma ọ bụ mebie ihe nchọgharị gị. Ikike imepe ihe nchọgharị iji tinye ọnụ na ngwọta gị bụ ụzọ kachasị mfe iji nweta oke ahịa.
Na nkenke, ọ ga-amasị m ịhụ Opera echepụta ma mebie iwu nke ihe nchọgharị. Safari na iPhone na-eme nke a. Ha anaghị eji iwu egwu egwu, ha na-eme iwu!
Ngwa na-aga n'ihu n'ịntanetị ma na-adịwanye mgbagwoju anya. Nchọgharị na-akwado ihe ndị bụ isi anyị na-ele anya Ria teknụzụ iji wuo, dịka Flex na AIR, ga-agbanwe Software dị ka ụlọ ọrụ Ọrụ ma nweta oke ahịa n'ụzọ dị mkpa.
Mee ka ndị mmadụ rụọ ọrụ na ihe nchọgharị gị, Opera. Mgbe ahụ ha ga-egwu na ya!
Ndenye Blog: Alpesh Nakars 'Blogosphere
Jul 25, 2007 na 4: 12 AM
Daalụ maka ịkekọrịta echiche gị.
Ekwenyesiri m ike na Opera ga-edozi ụzọ dị iche karịa "naanị" na-atọ ndị ọrụ ụtọ. N'ụzọ ahụ ha na - enweta (ma eleghị anya) ihe nchọgharị kachasị mma, mana naanị 5% na - eji ya. Ha chọrọ ụzọ dị iche, ebe ọ bụ na ha enweghị leverage Microsoft, ha ga-enwerịrị ihe okike.
Enwere m mmasị n'echiche gị banyere ịme ka ndị mmepe nwee nnabata. Ezigbo mma.
Jul 25, 2007 na 7: 52 AM
Ndepụta dị oke mma, na njedebe ikpeazụ bụ ihe na-akpali iche echiche. http://dev.opera.com/ dị ma nwee ezigbo ọdịnaya mana olee otu onye ọ bụla kwesiri ịchọta ya, eh? Ozi ọma ahụ bụ na ọtụtụ ọchịchọ gị nwere ike ime ngwa ngwa karịa ka ị chere - gịnị banyere
WHATWG si datagrid spec
Ihe vidiyo vidiyo nke WHATWG na ụdị ngosi Opera na nkwado VIDEO.
Enweghi m ihe doro m anya na ihe ị bu n'uche na nkwupụta mgbasa ozi na nnweta, mana á »dá» ‹nayaEditable spec ga-ezite nná» á »nke" Plumbing ".
Charting bu ebumnuche na-adọrọ mmasị na AFAIK adịghị na eserese ọ bụla ọ bụla, mana kedu maka ezigbo Opera Nkwado SVG? Site na obere ederede, ị ga-enweta chaatị gị.
Jul 25, 2007 na 3:13 PM
Ana m arụ ọrụ ihe mere okwu gị anaghị egosipụta… ụfọdụ ahụhụ ebe! Argh!
Jul 27, 2007 na 3: 25 AM
Ma eleghị anya ọ bụ n'ihi na ọ na-eji Opera? 🙂
Btw, trackback ahụ anaghị adị ka ọ na - arụ ọrụ - na “5 chọrọ” site na nke gị uld enwere ike ịbute nke a (echere m na m pụtara naanị onwe m dịka onye na-abụghị onye mmemme?)
Aug 17, 2007 na 11: 35 AM
Ugbu a, echiche banyere Opera ịbụ onye mere ihe ọjọọ chọrọ ụfọdụ ule - ya mere nwute banyere ikwu spam 😉
Ugbu a, ma eleghị anya, ị nwere ụfọdụ "ikwu nche" plugin na-eche na ikwu bụ a cross-saịtị scripting agha?